Indlu eduze nolwandle - I-Airbnb
Indlu eduze nolwandle
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Gérard
U-Gérard Ungumbungazi ovelele
Sizokujabulela ukukwamukela ekhaya lethu endlini etholakala edolobhaneni elincane, 4kms ukusuka echwebeni kanye nolwandle oluhle lwaseMytikas Akarnanie (eliphikisana neLefkada kanye ne-Ionian Islands). Abaningi bahamba ngezinyawo ezindaweni ezinezintaba. Sikunikeza igumbi langasese elingahlalisa abantu abangu-3. Ungadla nathi (yisho, ukubamba iqhaza kwamahhala kwezezimali). Iseluleko ngamasevisi anikezwa esifundeni kanye nemalimboleko yabaqondisi.
Ungaba nesidlo sasekuseni kanye nokudla nathi, ukucacisa ngaphambi kokufika kwakho. Singakweluleka ngamasevisi anikezwayo (ukusuka kwezikebhe, ukuqashwa kwezikebhe, amathaveni aphambili, ..) futhi sikuboleke amamephu neziqondiso. Sinomtapo wolwazi wezincwadi zesiFulentshi, imidlalo yebhodi futhi ungalalela umculo. Uma ungumuntu obhemayo, uyamukelwa futhi, kanye nesilwane osithandayo (sinenja nekati). Ithala elihle elinomthunzi. I-WIFI iyatholakala. Umshini wokuwasha onawo.
Indawo yokucima ukoma esiyithanda kakhulu yilena esenkabeni yedolobha laseKandila. Ngaphandle kwalokho, ukuhamba okuningi kungenzeka, ama-cove amaningi ayimfihlo!
Sizoba khona ngesikhathi sokuhlala kwakho ngaphandle uma sizozithokozisa ngokwethu ama-cove. Ungakwazi futhi ukunambitha ukukhiqizwa komndeni wethu we-organic (ingadi yemifino, ujamu, amafutha omnqumo, ...)
UGérard Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mitikas namaphethelo